Business | NepalPatra - Nepal's First 100% trusted onlne news
जेठ ११, २०७६ | 25th May, 2019
दमकमा कैलाश विकास बैंकको शाखा विस्तार
२७ चैत, झापा । कैलाश विकास बैंक लिमिटेडले झापा जिल्लाको दमकमा आफ्नो ४७ औं शाखा स्थापना गरी सोमबारदेखि कारोबार थालेको छ । सो शाखाको विधिवत उद्घाटन एक समारोहका बीच दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओलीले गरे । यस नयाँ शाखा सहित बैंकको शाखा संख्या ४७ पुगेको छ भने एटीएम संख्या २२ रहेको छ । बैंकले निकट […]
शेयर बजारमा सामान्य गिरावट, सर्टटर्म कारोबारी हाबी !
२६ चैत, काठमाण्डौ । साताको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजार परिसुचक नेप्सेमा सामान्य गिरावट आएको छ । निकै उतारचढाव देखिएको बजार ७ दशमलव ५२ अंकले घटेर १ हजार २ सय ८७ दशमलव १३ को बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्से परिसूचकमा झिनो गिरावट आए पनि कारोबार रकम भने एकअर्ब नजिक रहनुले अत्तालिनुपर्ने अवस्था नरहेको देखाउँछ । […]
देवः विकास बैंकको ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर खुला
२६ चैत, काठमाण्डौ । देवः विकास बैंकले सोमबारदेखि ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर खुला गरेको छ । साझा विकास बैंक र यूनियन फाइनान्स प्राप्तीपछि कायम चुक्ता पूँजी एक अर्ब ६३ करोड ३२ लाख रुपैयाँको १० बराबर ४ अनुपातमा हकप्रद सेयर खुला गरेको हो । फागुन १६ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाकासाथै […]
सनराइज बैंकको एकैदिन २ शाखा बिस्तार
२६ चैत, काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमिटेडले आइतबार रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिका र जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा आफ्ना दुईवटा नयाँ शाखाहरु बिस्तार गरेको छ । दुर्गाभगवती गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्ष अरुणकुमार शाह र बैंकका नायब महाप्रबन्धक अपछकुमार यादबले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । यस्तै, गुठीचौर गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारी र बैंकका नायब महाप्रबन्धक रविन नेपालले संयुक्त रुपमा […]
माछापुच्छ्रे बैंकद्वारा ग्राहकहरुलाई क्यास ब्याक अफर
२६ चैत, काठमाण्डौ । माछापुच्छ्रे बैंकले नयाँ वर्ष २०७५ को अवसरमा बैंकबाट जारी भएका भिसा चिप कार्डहरुलाई १० प्रतिशत क्यास ब्याक अफर ल्याएको छ । यस अफरमा बैंकबाट जारी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरी सामान खरीद गर्दा वा कुनै भुक्तानी गर्दा बील रकमको १० प्रतिशतले बढीमा रु.१,००० ग्राहकको खातामा फिर्ता हुनेछ […]
नाडेप लघुवित्तले ४.८ करोडको आइपीओ ल्याउँदै
२६ चैत, काठमाण्डौ । इक्रा नेपालले नाडेप लघुवित्त बित्तीय संस्थाले जारी गर्न लागेको साधारण सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ)लाई आइपीओ ग्रेड फोर प्लसको ग्रेडिङ प्रदान गरेको छ । यसको अर्थ यो कम्पनीको बित्तीय अवस्था औसत भन्दा तल भन्ने हो । यो कम्पनीले निकट भविष्यमै ४ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको आइपीओ निश्कासन गर्न लागेको छ । इक्रा […]
बोनस समायोजनपछि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य कति !
२६ चैत, काठमाण्डौ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले सोमबार कम्पनीको १० प्रतिशत बोनसपछिको शेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । नेप्सेले बोनस समायोजनपछि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य १ हजार ३ सय १४ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य १ हजार ३ सय ५२ रुपैयाँ ८२ पैसा लिइएको […]
नेप्सेमा उच्च अंकको वृद्धि, कारोबार रकम अर्ब नजिक
२५ चैत, काठमाण्डौ । आइतबार सेयरबजारमा उछाल आउँदा १६ कम्पनीका लगानीकर्ताले झण्डै दश प्रतिशतका हाराहारीमा कमाएका छन् । १७६ कम्पनीको कारोबार भएको बजारमा १४ कम्पनी बाहेक सबै कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । आज बजार उतारचढावका बीच ४४ दशमलव २६ अंकले बढेर १ हजार २ सय ९४ दशमलव ६५ को बिन्दुमा पुगेको छ । परिसुचक बढेसँगै आज […]
हिमालय उर्जाले २४.७५ करोडको आइपीओ जारी गर्ने
२५ चैत, काठमाण्डौ । हिमालय उर्जा विकास कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि २४ करोड ७५ लाख मूल्यको आइपीओ निश्कासन गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि ९ करोड ९० लाख बराबरको आइपीओ निश्कासन गर्नेछ । कम्पनीले रामेछाप र दोलखाका आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १०० रुपैयाँ […]
सेञ्चुरी बैंक र रिलायंस लाइफबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
२५ चैत, काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड र रिलायंस लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्सको सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार ग्राहकहरुले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट उक्त कम्पनीको बीमा लेख प्राप्त गर्न, प्रिमियम भुक्तानी गर्न, दाबी भुक्तानीलगायत सम्पूर्ण बिमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका का. मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन भट्टराई र […]
साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक बढ्यो
२२ चैत, काठमाण्डौ । बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको कारोबार सूचक(नेप्से परिसूचक)मा दोहोरो अंकको वृद्धिसँगै कारोबार रकममा समेत उछाल देखिएको छ । बुधबार पनि बजारमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको थियो । परिसूचक(इण्डेक्स) र कारोबार रकम(टर्नओभर) एकसाथ बढ्नु बजारको भविष्यका लागि सुखद संकेत हो । यो प्रवृति जारी रहेको खण्डमा भविष्यमा बजारले उछालको गति लिने […]
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र संस्कृत विश्वविद्यालयबीच सम्झौता
२२ चैत, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबीच विश्वविद्यालयका अवकास प्राप्त प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको मासिक निवृत्तिभरण (पेन्सन) भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । बिहीबार सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र विश्वविद्यालयका उप कुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता समारोहमा उप कुलपति कोइरालाले हाल विश्वविद्यालयका अवकास प्राप्त प्राध्यापक […]
नेप्सेको वेबसाइटमा समस्या, लागानीकर्ता अन्यौलमा
२१ चैत, काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्च (नेप्से)को वेबसाइटमा समस्या देखिएको छ । वेभसाइट नचलेपछि लगानीकर्ताहरु सेयर बजारको बारेमा जानकारी लिन पाइरहेका छैनन् । सर्भरमा समस्या देखिएपछि वेबसाइट खुलेको छैन । तर नेप्सेले भने इन्टरनेटको समस्याले पनि यस्तो भइरहेको जानकारी दिएको छ । समस्या समाधान गर्नका लागि पहल भइरहेको नेप्सले जानकारी दिएको छ । बजारका सूचना […]
नेप्सेमा सामान्य वृद्धि, कारोबार २१ करोडमाथि
२० चैत, काठमाण्डौ । आज बजार खुलेको एक घण्टा नबित्दै घटेको नेप्से पुर्ण रुपमा उकालो लागेर १ हजार १ सय ९९ अंकको विन्दुमा पुगेर कारोबार बन्द भएको छ । आज नेप्से ६ दशमलव ०४ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै क वर्गको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स २ सय ५५ दशमलव ९९ अंकमा पुगेको छ । धेरै […]
अमेरिकी अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्नेगरी चीनको निर्णय
एजेन्सी, २० चैत । चीनले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्नेगरी सीमा शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ । आफ्ना सामानको सीमा शुल्क बढाउने अमेरिकी निर्णयलाई उस्तै जवाफ दिएको छ । अमेरीकामा निर्यात हुने चिनीयाँ सामानमा अमेरिकाले सीमा शुल्क बढाएपछि चीनले पनि आफ्नो देशमा भित्रिने अमेरिकी सामानमा २५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ । चीनले चीनमा निर्यात हुने […]
थाहा पाउनुहोस्, पहिलो पटक यौनसम्पर्क पछि के गर्ने ?
धाप्लाङ्को पुल समय अवधिमा बनाई नसके एक्सन लिने : सांसद भट्टराई
कुन महिनामा जन्मिएका युवती कस्ता हुन्छन्, थाहा पाउनुहोस्
महिलाहरुले कस्ता खालका पुरुषलाई घृणा गर्छन्
गुजरातको ट्युसन सेन्टरमा आगलागी हुँदा २० विद्यार्थीहरुको मृत्यु
बलात्कृत किशोरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी
सुकुम्वासी बस्ती भत्काइयो
असिनाले करोडौं मूल्यका बाली नष्ट
जसले चुनौतीको चुचुरो चुम्दै इतिहास बनाए
नियमविपरीत गाडी चलाए रु एक लाख जरिवाना
दुई एकल महिलाद्वारा सगरमाथा आरोहण
क्यान्सरबाट मुक्त रहन यी खानेकुराहरु देखी टाढा रहनुहोस्
ललितपुरमा उत्रियो राजावादीको जनसागर
ओली सरकारमा एमालेवाट सम्भावित मन्त्रीहरु
नेपाललाई फेरि हिन्दू राष्ट्र वनाउनैपर्छ – पूर्वमन्त्री भण्डारी
अष्टेलियावाट आएका ई. बीरेन्द्रका छोरा सामिप्य मोडल श्रीष्टिसँग रोमान्स गर्दै
को हुन् गृह राज्यमन्त्री श्यामकुमार श्रेष्ठ ?
बहुमुखी प्रतिभाका धनी इन्जिनियर तथा गायक बिरेन्द्र श्रेष्ठको जीवन
सुरक्षा सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेका लागि डिक्यान
को हुन् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत ?
मल्टीभर्श फाउन्डेशन प्रा.लिद्वारा संचालित
सुचना बिभाग दर्ता नं: ३९६/०७३-०७४, संचालक/प्रधान सम्पादक : गोपाल भण्डारी © 2018 Nepalpatra.com, Powered by:Frntech